Hollywood Vanity Mirror, Style Makeup Magirazi pamwe wemwenje, Notizheft kana Wall hwavapo
Hollywood CHINOBATSIRA negirazi Lights
The BEAUTME Hollywood Vanity Mirror ndiye ano maturo ruzivo-munhu tetepa uye dzakanaka asi fadza magadzirirwo kuti inopa munhu akakwana, kunyange abatidza uye mukuru girazi kufungisisa zvakajeka. Rakanakira maumbirwe kushanda chero ezvinhu, musha kana nyanzvi-nekuti kutora kuti Instagram akakwana selfie!
Notizheft / wall vakatasva Mirror
Two Mhando Using- 1) Isai masikirwo girazi patafura; 2) Hang ari Mi rror pamusoro thewall
Shandisa maumbirwe girazi patafura
Vanity girazi anorembera pamadziro
Professional Vanity Mirror pamwe Lights kusarudza chiedza Kuvharwa kuti chiedza zuva, kunzwisisa zviri nani ukuru mimvuri. Made yepamusoro aruminiyamu puranga, simba, yakasimba uye varnished tinplate simbi pepuranga uye chawo kubvumira kuti kugara yakasimba patafura. Glossy musono splicing puranga inoita girazi zvikuru mukuru-mugiredhi uye yakanaka.
Save magetsi, fashoni uye kudzivirira zvakatikomberedza.
1. Touch tumafuta kuti batidza / kudzima inodziya chiedza / zuva chiedza.
2. Rakamira refu kubata kuchinja okuvimba kupenya.
Power: 100-240V, DC12V / 1a Plug-mu adapteri
Akatungamirira zviedza ruvara: kudziya yero chiedza (3200k) & chena zuva chiedza (6500k)
Saizi Product: 600mm (L) * 180mm (W) * 530mm (H) /23.62 "* 7,08" * 20,86 ";
Mirror Weight: pamusoro 5kg
Mirror With Light Mabumba , Vanity Light Mabumba , Makeup Mirror With Light Mabumba, Vanity Mirror With Light Mabumba,